कला / साहित्य – Page4– Nepal Parikrama
काठमाडौं । पत्रकार तथा कवि पवित्रा सुनारको कविता सङ्ग्रह ‘युगको आवाज’ लोकार्पण भएको छ । राजधानीको बागबजार स्थित होटल हार्दिकमा साहित्यकार तथा संस्कृतीविद् प्रा.डा. तुलसी दिवसले लोकार्पण गरेको हो । कविता सङ्ग्रह लोकार्पण पछि लोकार्पित कृतिबाट सुनारले ३ कविता वाचन गरेका थिए । वाचन गरिएका कविताहरुमा कृति प्रतिनिधि कविता ‘युगको अवाज’‘प्रिय भाई’ र हुरी चलेको सााझ शिर्षकका कविताहरुवाचन गरेका थिए ।कविताब
दिप्ती भट्ट । काठमाडौं– पत्रकार रोहित भण्डारी द्वारा लिखित नेपालमै सकिन्छ नामको पुस्तक जो कोहीले पढ्ने पर्ने पुस्तक हो । यस पुस्तक स्वदेशमै केही गर्न चाहनेहरूका लागि निकै प्रेरणादायी छ । स्वदेशमै विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर आर्थिक रूपले आफूलाई उदारणीय पात्र बनाउन सफल व्यक्तिहरूको बारेमा यस पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । पैसाकै लागि धेरै शिक्षित युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको सन्र्दभमा नेपालमै थोरै लगानीबाट
मिस तमाङ २०१७ को उपाधि पिङ्की घिसिङलाई
काठमाडौं– दशौ संस्करणको मिस तामाङको उपाधी पिङ्की घिसिङले जितेकी छन् । एभरेष्ट फेसन होम र नेपाल तमाङ कला संस्कृति केन्द्रको आयोजना भएको मिस तमाङको उपाधि घिसिङले जितेकी ह्न् । सहभागी ३५ प्रतिष्प्रधिलाई पछि पार्दै घिसिङले यो उपाधि हात पारेकी हुन् । मिस तमाङको फस्ट रनरअप नवाङ मोत्तान सेकेन्ड रनरअप रीता थिङ भएका छन् । प्रतियोगितामा फोटो जेनिकको उपाधि श्रीयाम थिङ, बेस्ट वाङकमा आस्मा मोत्तान, अनुसासनम
टेलिभिजन पत्रकार रोहित भण्डारीको दोस्रो पुस्तक “नेपालमै सकिन्छ” सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच उद्यमी तथा लेखक कर्ण शाक्य, पत्रकार रविन्द्र मिश्र, समाजसेवी उत्तम सञ्जेल तथा सम्भव छ अभियानका व्यवस्थापक डिल्ली तुलाधरले पुस्तकको संयुक्त रुपमा लोकार्पण गरे । लेकार्पण समारोहमा बोल्दै पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले प्रेरणादायी व्यक्ति तथा सन्दर्भहरु समेटेर लेखिएको पुस्तक नेप
काठमाडौ । सौगात मन्टेश्वरी स्कुलले बुधबार आयोजना गरेको सौगात आइकन २०१७ मा ३ बर्षदेखि ५ बर्षसम्मका बालबालिकाहरुले विभिन्न प्रतिभा प्रस्तुत गरेका छन् । काठमाडौंको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा भएको प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा स–साना बालबालिकाहरुले नृत्य, गायन, फेसन र बक्तृत्वकला प्रस्तुत गरेका हुन । जसअनुसार ५ बर्षिय पियान्सु मोक्तान प्रथम भए । बियोन्स गुरुङ द्वितिय, न्ह्युसा सिन्हा तृतीय भए भने सु
काठमाडौं– गायक प्रेम सेन पछिल्लो युवा पुस्तामा निकै लोकप्रिय बन्दै गएका छन् । एक पछि अर्को गर्दै आएका प्रेमका गीतलाई युवा पुस्ताले निकै मन पराएको पाइन्छ । सानी, तिम्रो पाउजु, चौबन्दी, थाहा छैन, म दोषि भए लगायत दर्जनौ गीत स्वरका धनी सेनले गाउनुभएको छ । प्राय: युवा बर्गको रोजाइ अनुसारका गीत गाउने प्रेमले युवा पुस्ताबाट पनि उस्तै प्रेम पाउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मेलै गाएका गीतहरू युवा पुस्ताम
के कारण मृत्यु भएको थियो प्रतिभाशाली गायक यम बुद्धको ?
काठमाडौ– अनिल अधिकारी अर्थात यम बुद्ध परिचित चर्चित गायक लन्डनमा मृत भेटिएको पुष्टि भएपनि उनको मृत्यु के कारणले भएको थियो भन्ने कुरा अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले घट्नाको पुष्टि गर्दै यस सम्बन्धमा थप जानकारी खोजिरहेको बताएको छ । मृत्युको कारण र विस्तृत विवरण भने अझै नआएको हो । शनिबार उनी लन्डन साउथ हयारोस्थित घरको बाथरुममा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् । २९ बर्षिय अधिकारी
काठमाडौं–रवि सिंह, पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेका मोडल हुन् । आफ्नो मोडलिङ यात्राको छोटो समयमै उनी सर्वाधिक चर्चामा छन् । रविको सानैदेखि मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्ने ठूलो रहर भएपनि उनले आफ्नो त्यो इच्छालाई गत बर्षदेखि मात्र मूर्त रूप दिन सके । पछिल्लो समय उनले अभिनय गरेका दुई गीत हुन् आचानोमा राखेर र तिम्रो पाउजु यी दुई गीत श्रोता र दर्शकमा निकै लोकप्रिय छन् । बजारमा जति गीतको चर्चा भएको छ, त्यति नै च
चर्चित भारतीय अभिनेता ओम पुरीको ६६ बर्षमा निधन
एजेन्सी । चर्चित भारतीय अभिनेता ओम पुरीको ६६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पुरीको हृदयघातका कारण शुक्रबार मुम्बइस्थित आफ्नै नीजि निवासमा निधन भएको हो । पुरी विभिन्न भारतीय, पाकिस्तानी, बेलायती तथा हलिउड चलचित्रमा अभिनयका लागि प्रख्यात थिए । अक्टोबर १८, १९५० मा हरियाणामा जन्मिएका पुरीले सन् १९७६ मा घासीराम कोट्वाल नामक मराठी फ्लिमबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए । पुरी हिन्दी चलचित्रहरु जाने भी दो
शुक्रबार ४ सय ६४ कोराना सक्रमित थपिए